कार्तिकेय ट्रष्टद्धारा बालसाहित्य लेखक र बालप्रतिभाहरु पुरस्कृत | Ketaketi Online
Home » कार्तिकेय ट्रष्टद्धारा बालसाहित्य लेखक र...
कार्तिकेय ट्रष्टद्धारा बालसाहित्य लेखक र बालप्रतिभाहरु पुरस्कृत
posted by ketaketionline on Sun, 02/03/2019 - 07:48
बालसाहित्य लेखक कार्तिकेयको लेखकस्वबाट स्थापित भई विगत २० वर्षदेखि प्रदान गरिँदै आइएको बालसाहित्य लेखक सम्मान तथा बालप्रतिभा पुरस्कारबाट यस वर्ष १० जना लेखक र बालप्रतिभाहरु पुरस्कृत हुनुभएको छ ।
वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र कार्तिकेय ट्रष्टका अध्यक्ष शिक्षासेवी मोहन कार्कीले संयुक्त रुपमा पुरस्कार समर्पण गर्नुभएको थियो ।
समारोहमा कार्तिकेय पिता चन्द्रनाथ घिमिरेको ८४ औं जन्मदिनको शुभअवसरमा प्रदान गरिएको वर्षका उत्कृष्ट लोककथाकार पुरस्कारबाट इन्दिरा दली र उहाँकै माता दुर्गादेवी घिमिरेको स्मृतिमा स्थापित दुर्गादेवी उत्कृष्ट बालसाहित्य लेखक पुरस्कार तथा सम्मानबाट क्रमशः वरिष्ठ लेखकहरु रञ्जुश्री पराजुली, जलेश्वरी श्रेष्ठ, सुशीला देउजा र फरक क्षमताको लेखकका तर्फबाट दृष्टिविहीन निरा अधिकारी पुरस्कृत हुनुभएको थियो । साथै, समारोहमा कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट अनुष्का पौडेल, उर्भी सिंह, केशव बादी, याङ्जी थोकर र अदिश्री फैजु पुरस्कृत हुनुभएको थियो ।
वरिष्ठ लेखक रञ्जुश्री पराजुली पराजुलीले बालसाहित्य लेखन र अनुसन्धानमा उत्कृष्ट योगदान गर्नुभएको छ । वरिष्ठ लेखक जलेश्वरी श्रेष्ठले बालसाहित्य लेखन, बालसाहित्यको संस्थागत विकास, बालपुरस्कार स्थापना र बालसेवाका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्नुभएको छ । चार भाषामा प्रकाशित पहिलो बालचित्रकथाकृति ‘बाघ र बाबा’ को रचना गरी वरिष्ठ लेखक सुशीला देउजाले उत्कृष्ट योगदान गर्नुभएको छ । त्यस्तै फरक क्षमताका लेखककहरुबिच आयोजित प्रतियोगितामा ‘जून मामा’ बालकविता संग्रहको रचना गरी दृष्टिविहीन बालसाहित्य लेखक निरा अधिकारी यस वर्ष पुरस्कृत हुन सफल हुनुभएको छ ।
त्यस्तै बालप्रतिभाहरुतर्फ बालप्रतिभा अनुष्का ‘बाघभैरबको जात्रा’ कृतिका लेखक हुनुहुन्छ र हाल निःसर्ग बाटिका स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । उर्भी सिंह चित्रकला र संगीतमा अब्बल हुनुका साथै र धेरैभन्दा धेरै बालसाहित्यका किताब पढ्ने प्रतिभा हुनुहुन्छ । उहाँ फिनिक्स स्कुल, सानेपामा कक्षा १० मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । बालप्रतिभा केशव वादी दृष्टिविहीन उत्कृष्ट बालगायक हुनुहुन्छ । उहाँ अपाङ्ग सेवा केन्द्र, बुङ्गमती, ललितपुरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । बालप्रतिभा याङ्जी थोकरले तामाङ भाषामा बालसाहित्य रचना गरी एउटा बालपुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ । उहाँ वासु मावि भक्तपुरमा कक्षा १० मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । त्यस्तै ६ वर्षकी बालप्रतिभा अदिश्री फैजु हाल अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । उहाँले कक्षा १ मा पढ्दै १ हजार किताब पढ्नुभई त्यहाँको मेयरबाट पुरस्कृत हुन सफल भइसक्नुभएको छ । साथै ट्रष्टको तर्फबाट यस वर्ष १५ जना विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन युवाहरुलाई एक वर्षभरि लेख्न पुग्ने ब्रेल कागज/कपी पनि प्रदान गरिएको छ ।
पुरस्कृत लेखक तथा साना उमेरका बालप्रतिभालाई जनही ५ हजार नगद, मेडल र प्रमाण पत्र तथा बालप्रतिभाहरु अनुष्का र उर्भीलाई जनही १० हजार नगद, मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
समारोहमा रिड नेपालका अध्यक्ष भोलाकुमार श्रेष्ठ, डा. सुवास घिमिरे, प्रो. दिनेश चापागाईं, दयाराम थापा लगायतका व्यक्तित्वहरुले बालबालिका र पठन संस्कृतिबारे मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । समीक्षक महेश पौड्यालले पुरस्कृत तथा सम्मानित प्रतिभाहरुबारे बोल्नुभएको थियो । साथै समारोहमा वरिष्ठ बालसाहित्य लेखकहरु प्रभा भट्टराई, ललिता दोषी, विजयराज न्यौपाने, सुशीला प्रधानाङ्ग, लालबहादुर भूजेल, मिना महर्जन, विजयरत्न तुलाधर लगायत, ब्राइतफ्युर हाई स्कुल, नैकाप, काठमाडौँ, क्यामेलिया स्कुल, कालिमाटी, काठमाडौँ र फिनिक्स स्कुल, सानेपा, ललितपुरमा अध्ययनरत बालप्रतिभाहरु र फरक क्षमताका बालप्रतिभाहरुले पनि आआफनो प्रतिभा प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । समारोहमा फिनिक्स स्कुलका बालबालिकाद्धारा रोचक लघुनाटक पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा ट्रष्टका संस्थापक कार्तिकेयले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
समारोहमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै सत्यमोहन जोशीज्यूले पठन संस्कृतिको विकासका लागि कार्तिकेय ट्रष्टको प्रयास सह्रानीय रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा उद्घोषण स्वर्णिम लम्साल र आश्मा अर्यालले गर्नुभएको थियो ।